Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Septambra 2019 à 19:08
17 octets ajoutés , il y a 11 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Septambra 2019 à 19:00 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Septambra 2019 à 19:08 (hanova) (esory)
Ny vava Alahamady ao amin'ny volana Alahamady dia atao hoe [[Alahamadibe]]. [[Ralambo]] sy [[Andriamasinavalona]] ary [[Andrianampoinimerina]] ihany anefa no mpanjaka teraka tamin' ny vava-Alahamady. Io no natokana hanaovana ny [[Fandroan'Andriana]]. Andro mahery ny vava Alahamady ka ny zaza teraka amin'io dia alam-bintana fandrao misavika ny andriana, ka raha ankohonan'ny Andriana dia tsy avela hiara-mitoetra aminy.
Ny olona teraka vonto Alahamady dia ampitehirizina amponga telon-jehy sy ampiiompinaampiompina gisa fotsy mivady mba ho tratra antitra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974869"